NRVNA usebenzisa isihloko obalaseleyo isithuba kunye nexesha-based eya ukonwabisa lonke. Le nkqubo ibandakanya 30 paylines kunye 5 namacwecwe. Olu Gameplay ukuhlekisa uya kukwenza ukujija bhobhile ngokuphindaphindiweyo kunye neempawu neekepusi kukugana ube emdlalweni.
Uzakuyonwabela lo mdlalo ngoko musa ukulibala ukudlala kuba ehlekisa ekhasino yethu. Ungabhalisela simahla kwi Coinfalls Casino ngokufaka imali efikelela kwi £ 50,00 kwaye ufumane 200% asingqinelani ibhonasi.
NetEnt uyile lo mdlalo bayotywe lumnandi apho imizobo nenotshi phezulu nomculo nemvelaphi ndijonge. NetEnt iye ngokuyila zokubeka odidi Casino imidlalo leyo ophezulu ngomgangatho le yenye imidlalo okuhle.
NRVNA inomxholo eliyimbalasane leyo iza kudala umdla omkhulu yaye aziyeki kulo mdlalo nobuhle entle. A coin size from 0.01p to £150.00 can be fixed in this game.
NRVNA usebenzisa iisimboli isiseko ezifana 10, J, A, K, kwaye Q ukuhlawula nina neziphindi ye ukuya x125.
Neempawu eziphambili kulo mdlalo ziquka amagqabi ezine clover, intsimbi yehashe, cherries, ngasixhenxe, neentsimbi. Ezi mpawu ungenza ikuhlawule lingabali oncomekayo ukuya x2, 000. Umdlalo isebenzisa isimboli amarhamncwa inkwenkwezi emhlophe ngaphakathi kwiqamza pink leyo lifaka yonke imifanekiso i bhobhile ngaphandle logo usichithachithe.
Le logo usichithachithe na nekalikedo omhlophe lusongelweyo kwiqamza-orenji kunye iyazingenela aziyeki ivideo ziyavela. Ukuba ufika ngemiqondiso ezintathu twatse imifanekiso uchithachitha esinokumfumanela ukuya 10 aziyeki ivideo chi ezine kuya kukunceda 15 aziyeki abakhululekileyo 5 Uchithachitha kuya kuphumelela ukuba 30 aziyeki.
Nangona aziyeki zipalini ekusonteni ifitsha ivili NRVNA icukumisiwe apho ufumana esikhulu x10 kunye 2 ezingaphezulu aziyeki ivideo. Umdlalo kwa ne imo ngokuzenzekelayo apho ungacwangcisa ngokuzenzekelayo i bhobhile spin leyo uya kuxhokonxa axhaphaze ezinkulu. Ngoko hlala umva kwaye ukhululeke. Itsala indawo Rtp ezisemagqabini 96.60%.
NRVNA na njengephupha slot ividiyo esekelwe uthembisa ukunika kukuzonwabisa nokuzonwabisa. Ukuba ngaba umthandi zokubeka bejonge umdlalo slot okuqaqambileyo ngoko lo akayi kuphoxa. Bhalisa simahla kwi yekhasino yethu ukufumana uhlobo obalaseleyo mke 200% kwi idipozithi yakho yokuqala ukuya £ 50.00.Hurry yinxalenye yekhasino yethu ngoku!